हाच्छिउँ रोक्दा गम्भीर समस्या ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com हाच्छिउँ रोक्दा गम्भीर समस्या ! - खबर प्रवाह
चिकित्सकका अनुसार नाक र मुख बन्द गरेर हाच्छिउँ गर्नु खतरनाक हुन सक्छ । त्यसैले यसो गर्नबाट बच्नु जरुरी छ । हुनत हाच्छिउँबाट धेरै रोगहरु फैलिन सक्छ । यस्तोमा बरु मास्क लगाएर नै हाच्छिउँ गर्नु नै उत्तम हुन्छ । यसो गर्दा आफूमा भएको संक्रमण अरुमा सर्न पनि पाउँदैन । आफूलाई पनि हानि हुदैँन । त्यसैले कुनै किसिमको क्षतिबाट बच्न निर्धक्क हाच्छिउँ गर्नु राम्रो हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
केपी ओलीकै कारण मुलुकमा अस्थिरता सृजना भएको छ : माधव नेपाल